16/03/2018 - 13:00 : AKON'NY RIVODOZA: Trano 30 faharafahakeliny no potika ao amin'ny Fokontany Ambinany Sonierana Ivongo. Tra-boina 95 no efa nesorina tamin'ny toerana nisy azy.
16/03/2018 - 12:30 : INDSOTRIA: Hankalaza ny faha-60 taonany amin'ity taona 2018 ity ny sendikan'ny Indostria Malagasy na ny SIM, ka hisy ny hetsika goavana "Salon de l'Industrie" ny volana jona izao.
16/03/2018 - 12:00 : POLITIKA: Tsy vahaolana ny fanatanterahana fifidianana, hoy i Gaby Vakiniadiana, mpitarika ny antoko VHM na Vahoaka Miray.
Archive du 20170830
Pasitera Mailhol Hopotehan’ny fanjakana HVM …
Tsikaritra ho mangatsiaka ny fifandraisana eo amin’ny fiangonana Apokalipsy, tarihin’i André Christian Dieu Donné na Pasitera Mailhol sy ny fanjakana Rajaonarimampianina amin’izao fotoana.
Mpitondra fanjakana Tokony hanaiky ny fanehoan-kevitra malalaka
Voasoratra mazava ao anatin’ny Lalàmpanorenana Malagasy andininy faha-10 ny zo miaraka amin’ny fiarovana ny olom-pirenena maneho hevitra malalaka.
Nicolas Randrianasolo Mila ady amin’i Onitiana Realy
Mpanao politika anisan’ny mahery fiteny eto amin’ny Firenena i Nicolas Randrianasolo, depiote voafidy avy any Betroka.
Jean Navandahy Ratiharison « Handany volam-panjakana fotsiny ny fampihavanam-pirenena»
Anisan’ireo fikambanana nametraka vina hampandray anjara ny olom-pirenena tsirairay amin’ny fampandrosoam-pirenena ny fikambanana Za’gasy sahy mandroso tarihin’ny filohany Jean Navandahy Ratiharison.
Henri Rabary Njaka “Araha-maso akaiky ireo vahiny hipetraka eto”
Mbola nitohy hatramin’ny omaly ny famindram-pahefana teo anivon’ireo minisitera isan-tsokajiny taorian’ny fanovana ireo mpikambana vitsy eo anivon’ny governemanta.
Tsy mianatra lesona
Manahoana Jean a ! Ianao ity ry Jean dia tena maditra sy be lalao mihitsy an! Tsy efa impiry namerina kilasy moa izao ianao io?
Raharaha Riana Andriamandavy VII Tsy havelan’ny SMM ho vitavita ho azy
Niova ny minisitry ny fitsarana, saingy efa nanipy teny ny avy amin’ny Sendikan’ny Mpitsara eto Madagasikara (SMM) tamin’ny alalan’ny Filohany Fanirisoa Ernaivo, fa tsy hampiova ny fitakian’izy ireo izany.
CSB-1 Ambohiboromanga Ambatomanga Notoloran’ny depiote Rodin fitaovana
Am-bolana no efa nihodina ity tobim-pahasalamana fototra eo anivon’ny fokontany Ambohiboromanga, kaominina Ambatomanga ity, izay any amin’ny 30km miala an’Arivonimamo.
Olona 187 may trano teny Andohatapenaka Notoloran’ny CUA fanampiana
Miisa 187 ireo mponina traboina vokatry ny hain-trano teny amin’ny fokontany Andohatapenaka I sy II ny alahady 27 aogositra teo.
MY CREW sy ny vondrona STAR Hanangana trano vita amin’ny tavoahangy plastika
Mihapotika ny tontolo iainantsika eto Madagasikara ankehitriny. Lohalaharana amin’izany ny fiovaovan’ny toetr’andro vokatry ny doro tanety, ny setroka fiara…
Tsenan’Anosibe Hohavaozina ny karatry ny mpivarotra
Miezaka manampy ireo mpivarotra ara-dalàna ao aminy ny tsenan’Anosibe.
Malagasy niasa tany Maorisy Maty nodonin’ny fiara ilay vehivavy
Vehivavy Malagasy iray 32 taona antsoina hoe Dyane,
Asa fa tsy kabary !
Tsy vahiny amin’ny fampanantenana mipoapoaka nataon’ny mpitondra teto ny vahoaka Malagasy, ary anisan’ny tompondakan’izany ity fanjakana HVM ity.
Ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo Lehibe ny anjara asan’ny vehivavy
Nosokafana omaly talata 29 aogositra 2017 teny amin’ny Café de la Gare Soarano ny atrikasa lehibe karakarain’ny Tahiry iraisam-pirenena momba ny fanjarian-tsakafo sy ny fambolena (FAO), izay tsy hifarana raha tsy rahampitso alakamisy.
Rado Ratobisaona Tsy misy politikan’ny vola ratsy fa …
Antony iray tsy mampandroso an’i Madagasikara ny tsy fisiana politika ara-bola mazava raha ny filazan’ireo mpahay toekarena sasantsasany.
Fanamboarana sy fanavaozana Mandany 4.400.000 Ar isan-taona ny sekoly iray raha kely
Herinandro vitsy sisa no isaina dia hiverina an-tsekoly ireo mpianatra manovo fahalalana eny anivon’ny sekoly tsy miankina manerana ny Nosy.
Vao avy niandry faty ny lehilahy iray dia nisy namono teny an-dàlana indray.